Zanu PF Inoti Haimanikidze Vanhu Kupinda Mubato Iri
Chivabvu 20, 2021
Bato reZanu PF rinoti manyepo ari kutaurwa nevanhu ekuti riri kumanikidza vanhu kuti vaite nhengo dzaro.
Vachitaura nevatori venhau nhasi kumuzinda webato ravo muHarare, mutauriri we Zanu PF, VaSimon Khaya Moyo, vati bato ravo harina warinomanikidza kuva nhengo vakati vanhu vari kubuditsa mashoko aya vanhu vari kuda kusvibisa bato ravo iro vati richakunda zvine mutsindo musarudzo dza2023.
VaMoyo vatiwo kana zvakadai zvikaitika vanhu vanofanirwa kunomhan’ara kumapurisapamwe nekubato ravo.
Asi VaSolomon Bosibunu, avo vanoshanda nesangano reElection Resource Center, vati havasati vanzwa nyaya dzevanhu vari kumanikidzwa kunyoresa kuve nhengo dzemapato ezvematongerwo enyika avasingadi vakatiwo kana pane vari kuzviita zvakaipa.
VaMoyo vatiwo bato reZanuPF riri kufadzwa nemashandiro ehurumende yeVaEmmerson Mnangagwa vakavarumbidza vachiti vakwanisa kuvandudza nyaya dzebudiriro, kugadzirisa maindasitiri pamwe nekukoshesa nyaya dzehupfumi hwenyika, izvo zviri kuita kuti vanhu vawane mabasa.
Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance, vaClifford Hlatywayo, vapokana nemashoko aVaMoyo vachiti nyaya yekuvandudza mararamiro evanhu zvinhu zvinofanirwa kuonekwa nekuchinja kwehupenyu. Vati pari zvino hapana chiri kuchinja munyika vakati zvinhu zviri kuwedzera kuipa.
Mumwe wechidiki, Muzvare Eustina Chari, avo vanoti vakapedza zvidzidzo zvavo zvepamusorosoro makore matatu apfuura vatiwo havaoni kuvandudzwa kwehupfumi kana vanhu vakadzidza vasina mabasa.
Zanu PF yatsinhirawo mashoko ekuva nematare akasununguka ichiti hakuna munhu anofanirwa kutuka vematare pamwe nekutaura zvinokanganisa nyaya dziri kumatare.